How kusarudza achimhanya shangu?
Sports uye Fitness, Midziyo
Zuva nezuva, kumhanya kuramba nevakawanda mhando kudzidziswa. Vari kuita vatambi vanoda kuramba muviri wakasimba. Asi vanhuwo usamhanya kure. Uye izvi zvinofadza. Kana wose kuroora munhu achava kutarisira utano hwako, uye rudzi rwose muzuva rimwe uchava noutano. Kana ukasarudza ose zuva rokuita basketball, zvinokosha chaizvo kuti zvakarurama kuswedera kusarudzwa michina. Naizvozvo, muchidimbu ichi nezvazvo sei kusarudza zvakanaka achimhanya shangu.
Zvikonzero kuti anogona kuchinja sarudzo yako pamusoro basketball
Kana paine chaiyo chikonzero, unogona kuenda basketball, ane simba zvakakwana kukurudzira. Nhamba dzinoratidza kuti vakawanda kukanda kudzidziswa mhando iyi. Nei izvi zvichiitika?
Hapana kukurudzira zvakakodzera. Somuenzaniso, mumwe murume akanga basketball mangwanani. Sei? Kana iye asina kunzwisisa uye haangazvidembi kunzwisisa zvikonzero wechokwadi chido ichi, zvino pane imwe nguva akanga asingagoni kuuya iye kubuda uye kutarisira madenderedzwa shoma kumativi munhandare. Saka usati watanga Workout wako, une zvakakwana vafungisise zvinangwa. Vanogona kuva chinhu. Somuenzaniso, mumwe musikana anogona enda basketball kuderedza uremu.
The migumisiro zvikuru kunonoka. Zvinowanzoitika ezvinhu kana munhu anoona chinangwa. Zvisinei, pashure penguva akanga kutotanga kuziva kuti chinangwa haasi kuenda kunyange kutaura. Saka maoko vari akatura, uye chido chokuita zvimwe nokupera.
Zvakakosha kusarudza mbatya zvakanaka (shangu nokuti basketball, mitambo suit). Uyu zvakanaka chaizvo chikonzero, nekuramba risingagoni kuva migumisiro Zara. Nguo dambudziko vasimuke. Chinhu chikuru - kupfeka zvinhu nyore. Muchiitiko chino, zvinhu zvinofanira kunge zvakachena. Asi wakamhanyira shangu zvinogona kukonzera zvimwe zvinetso. Kana sarudzo yako kwakaipa, zvichava hazvifadzi chaizvo tsandanyama marwadzo. It kuchawedzera mukana zvinokuvadza. Uye tsoka dzake dzichamira kuneta zvikuru. Zviri pachena kuti pane dambudziko mhando iyi kunogonawo kukanganisa mupfungwa mamiriro. Zuva rakatevera, mumwe munhu anogona kungoti kushandura pfungwa dzako kuroorana. Chii chinofanira kuva inoyerera shangu? Sei kusarudza zvakanaka? Izvi ndizvo huchakurukurwa.
Tinofanira kutanga lacing
Sarudza achimhanya shangu? Tanga lacing. Pereshnurovat vanofanira yazvo nenzira. Uye kunyange kana uri panguva ino kunzwa uchinyara uye kusagadzikana mune chitoro, ipapo zvose zvichava abhadhare. Izvi zvichakubatsira kunzwisisa, yakakodzera shangu kana kwete. Chii chinofanira kuitwa?
Vabvise tambo vaikudzwa mawindo.
Zvakafanana norwonzi shangu zvakare. Hazvina zvakafanira kuti vawane dzakakwirira arambe achirema.
Tiri kuedza kudhonza rutsoka rwake kubva shangu. Chakaitika? Izvi mitambo shangu nokuti basketball chakakunakira. Zvisinei, zvinonzi kunzwisiswa kuti zvakare vakasununguka kumhanya shangu havafaniri kuva.
Chinhu chikuru - kwete kuti kururama pamwechete saizi
The chiito wechipiri kudikanwa kusarudza imwe saizi. Zvakakodzera resi kukwira nemanyatera gumbo zvachose. Shure tambo iyi vanofanira kudzokera mumakomba avo vose, kubva izvo iwe nacho. Mugumisiro nzira iyi ichava kuti shangu achava chose kukodzera maoko nemakumbo. Kana shangu pashure dzose pamusoro nzira iri diki, iwe haufaniri pakarepo kuenda kusarudza mumwe peya. Edza pereshnurovat zvimwe. On wokugadzira lacing kunotsamira zvikuru.
Upamhi shangu inoita basa rinokosha
In danho rinotevera chinofanira kuti vasarudze zvakarurama upamhi shangu. Uyu zvikuru pfungwa inokosha. Uye anofanira kutakura mupfungwa kana uchida zvakanakisisa kumhanya shangu. In chii ezvinhu noupamhi dzekirimbirini anogona kunzi vakakwana? Kana unogona chifambisa zvigunwe zvenyu kumativi. Panguva insole apo vakabatirira varege.
Zvinofanira kunzwisiswa kuti shangu chigunwe nzvimbo anofanira kanenge 7 millimeters vakasununguka nzvimbo. With ichi, uchawedzera akasununguka, vakasununguka, sezvo panguva basketball chiri kuwedzera rutsoka nokuda mutoro. Kunyanya zvakasimba zvinokanganisawo manheru.
Cherechedzai inofanira kubhadharwa kuboka mutsetse
Unoda kodzero achimhanya shangu? Panguva rwokutenga vanofanira kuteerera mudanga mutsetse. Tinofanira kutanga kubvisa shangu dzake, nokurikunda muruoko akaiisa pasi. Pashure abut pasi pechigunwe kuti pasi uye yakarohwa pamusoro chitsitsinho. Zvakakosha kuti kuongorora panhanho ipi kuumbwa muchirugu. Kana shangu anoitwa zvakanaka, zvichaita kupindirana zvizere tsoka. Nemamwe mashoko, mudanga hakungavi pakati, uye vari forefoot, nokuti gumbo ndeyokubvisa munzvimbo minwe.
Kana zvisina kukodzera kuumbwa nedanga, kana shangu imwe vaviri vari akapeta munzvimbo dzakasiyana, zvingaita sokuti sandarara. Izvi zvine ngozi zvikuru vana. Kana shangu achandipfugamira chaizvo, zvakasimba chaizvo, pashure penguva yakati kutanga kurwadzisa tsoka dzake.
Nokugadzirisa chemabhazi Via insoles
Chiizve Ndinofanira kuteerera? Funga kana insoles, rutsoka kwokururamisa zvinodiwa. Kana uine tsoka sandara, vachanoshumira sezvi- rutsigiro. Nokudaro, run zvichava nyore uye nyore. Zvevana nemanyatera munhu fanira hwaro anofanira vakagadzirira pamwe bvisika insoles.
Chii chinofanira kuva inoyerera shangu muchando?
Unofanira kufungei kusarudza shangu nokuti basketball muchando? Pakusarudza shangu mumamiriro ezvinhu zvakafanira kuteerera zvimwe zvinhu zvinokosha. Ivo ndeinotevera:
Shoes havafaniri kuva kunyorova.
Vanodzidzisa vanofanira kutsungirira matambudziko kubva hasha reagents.
The shangu anofanira vakagadzirira chaizvo tichifungisisa zvinhu. Izvi imhaka yokuti rikawira kuti kwasviba mangwanani. Saka, zvinokosha kuva nechokwadi chokuti iwe ndamboona kure.
In yechando, menzira kusaswa reagents. Nokudaro, akaumba nechipiriso. Kana ukaenda kune nzvimbo kure basketball, ipapo tsvina kwakadaro haangapukunyuki. Naizvozvo, zvinokosha kusarudza vachida avo shangu tinoitirwa emvura-dzinga zvinhu. To shangu hadzitedzemuki, izvozvo vakapakata yakatesvera panyanga dzacho kana mudziviriri. Zvinokoshawo kufunga kana kutenga bhutsu.
Kana kutenga shangu?
Pasinei zvinoitika shangu sarudzo kuti basketball. Female kana munhurume, kana ivo isapinda, vachibatsira kana kwete, uye zvichingodaro .. zvinhu izvi zvechokwadi kukonzera. Asi chinonyanya kukosha kutenga shangu manheru. Ndechipi chikonzero? The ndechokuti akanga ari manheru pashure tsoka nezuva rukazara mitoro. It anova zvakakura ukuru. Uye kana ukatenga shangu manheru, tinogona kudzivisa zvikanganiso yaro ukuru.
Zvinofanira kunge kwazvo yokusvika kuna kusarudza pakukura. Haufaniri kutenga muenzaniso kuti aimbova kuva duku. Vamwe vatambi vanyadziswe pakukura tsoka dzavo. Kakawanda, tightness ichi ndizvo kuti vasikana. Nokudaro, shangu ivo kuwana saizi duku. Zvisinei, hapana chakanaka harigoni kutungamirira. Zvinonzwisiswa kuti rutsoka noutano kukosha runako rwavo. Uye kana iwe kutenga diki shangu, nguva dzose basketball kana kunyange nyore kufamba achatora kwazvo.
Okuwedzera dzekuziva kuti anofanira Aizvirumbidza
Attention inofanira kubhadharwa kuti cushioning Mapedhi - ipapo kana kwete. Navo, unogona kuponesa tsoka dzenyu pakukuvara panguva basketball.
Ndezvipi zvimwe vakasarudzwa nzira vanofanira kungwarira? Zvakawanda achavaponesa pakukora masokisi kuti shangu. Kana iwe kutenga shangu, kwete kufungisisa chinhu ichi, vanogona zvino kutanga vomanikidza minwe. Naizvozvo, kana kusarudza shangu zvakasiyana-siyana mwaka, unofanira kutora pamwe masokisi aunoda kupfeka pamusoro nguva Zara.
Test yakatengwa shangu vanofanira kutanga pamba. Zvinofanira kuva akafanana ari shangu kwechinguva. Kana ukanzwa kusanzwa, asati atanga, kuti shangu kusarudzwa kwakaitwa nemazvo. Tikasadaro, tinofanira kuedza kuchitsinhanisa mumwe, yamunenge.
In pakudzokorora ichi, isu akatarisa zvimwe zvinhu zvikuru kukosha kuti vanofanira kuteerera kana uri kutenga bhutsu nokuti basketball. Vose kutamba zvikuru basa rinokosha, uye harisi zvakakodzera kuti haana hanya navo. Hapana chakanaka hazvingaiti. Zvino imi munoziva izvo shangu ndiyo yakanakisisa akakodzera kuti kumhanya. Tinovimba kuti pakudzokorora uku ichakubatsira kusarudza. Kunobudirira kudzidziswa!
Kurodza kuvhima mapanga: Ezvemutauro Sharpening angled. How yokurodza rokuvhima banga
Planing - chii? Washington City Offices magwa
How kuti banga kubva faira?
The akakurumbira pfuti "Swift" uye ayo unhu
"Saiga 308" isp.44: description, dzinovaka. Carabiner okuvhimisa
Water jets kuti zvikepe uye zvikepe: wongororo pamusoro vaburitsi, zvakanakira nekuipira
Chii "Turboslim" inonyatsobudirira (wongororo)
Airport: hope dudziro, dudziro uye pezvairehwa nezvaakaratidzwa
Chinese ruva - yokumabvazuva muenzi mubindu redu
Taura nematombo. Kushandura pfungwa kune "PV" nerubatsiro rweDombo reNyika
Error nvlddmkm.sys. Blue Screen pamusoro Windows 7 pashure kugadzwa mutyairi
Chii chinonzi "Youtube" uye kuti ungashandisa sei? Nzira yekushandisa sei "Youtube"?
SWAT zvombo yakarohwa pasina shuva
Uye munoziva chii chinofanira kuva shamwari?
Harmony zvokuimba (tsananguro)
Nhanga: zvinobatsira zvivako uye contraindications. nhanga zveutano
Pathetic - chii? Mienzaniso zvinoreva uye